3-D Account-Based Marketing (ABM): Ahoana ny fomba hitondranao ny varotra B2B anao amin'ny fiainana | Martech Zone
Rehefa mihamitombo hatrany ny asantsika sy ny fiainanay manokana amin'ny Internet, ny fifandraisana sy ny fifandraisana B2B dia niditra tamina refy hybrid vaovao. Marketing amin'ny kaonty (ABM) dia afaka manampy amin'ny fandefasana hafatra mifandraika amin'izany ao anatin'ny fiovan'ny toe-javatra sy ny toerana — fa raha tsy mifanaraka amin'ny fahasarotan'ny toeram-piasana vaovao miaraka amin'ny habe vaovaon'ny teknolojia ny orinasa izay mampiasa angona momba ny kalitao, ny fahitana mialoha ary ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy.
Noho ny fihanaky ny valan'aretina COVID-19, ireo orinasa manerana an'izao tontolo izao dia nieritreritra indray ny fandaharana asa lavitra.
Manakaiky ny antsasaky ny orinasa nohadihadian'ny CNBC dia nilaza fa hampiasa modely birao hybrid izy ireo, miaraka amin'ny mpiasa miasa tapa-potoana avy any an-trano, raha ny ampahatelony kosa milaza fa hiverina any an-trano izy ireo. amin'ny olona-voalohany ny toe-piainana.
Maherin'ny antsasa-manilan'ny mpiasa any Etazonia izay tia asa lavitra no misafidy ny hiala fa tsy hiverina any amin'ny birao, nitarika ny fikambanana mpivarotra hanakorontana ny lisitry ny fifandraisana ho toy ny business-to-business (B2B) miala amin'ny orinasa taloha ny mpividy ary manomboka amin'ny orinasa vaovao.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra, ny varotra dizitaly dia nanaporofo ny fiainana mifandray amin'ny kaonty kendrena sy ny fanantenana ao anatin'ny hetsika sy fivoriana manokana nofoanana. Efa ho ny antsasaky ny orinasam-pandraharahana dia milaza fa nandalo fiovana "manaitra" ny varotra mandritra ny areti-mifindra, miaraka amin'ny ABM misongadina. Mpitarika ara-barotra efatra amin'ny dimy no milaza fa hampitombo ny fampiasam-bola amin'ny ABM amin'ny taona ho avy; ny fifandraisana tokana sy manokana ataon'ny ABM dia afaka mamokatra fampiakarana fidiram-bola hatramin'ny 30% raha ampitahaina amin'ny fampielezan-kevitra mahazatra iray amin'ny maro.
Mba hahatratrarana izany tanjona izany, na izany aza, ny orinasa B2B orinasa dia tsy maintsy manaraka fomba fiasa iraisana. Fahaizana artifisialy (AI) ary fianarana milina (ML) dia afaka manampy ny orinasa hahatsapa ny tadiavina hatry ny ela fijery tokana ny mpanjifa- fa raha manolo-tena amin'ny paikady angon-drakitra telo dimension ihany izy ireo.
Ny habe telo amin'ny angona ABM
Isan'ny data ary Quality
Ny angon-drakitra avy amin'ny mpikaroka momba ny teknolojia Forrester dia mampiseho fa latsaky ny telo isan-jato no manasaraka ny fantsona 10 ambony amin'ny laharan'ny loharanon'ny mpividy B2B manontany rehefa mikaroka ireo mpivarotra mety - izay manondro fa ny orinasa dia tsy maintsy mahay amin'ny fomba maro ary mampiasa ny teboka rehetra eo am-pelatanany mba hifandraisana amin'izy ireo. prospects ary manompoa azy ireo ny atiny mifandraika amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Ho fanampin'izany, ireo orinasa orinasa izay miantehitra amin'ny fivarotana fanavaozana, fanatsarana ary vokatra na serivisy vaovao amin'ny mpanjifa efa misy dia mety efa manana mombamomba ny mpampiasa mifototra amin'ny hetsika ao amin'ny tranokalan'ny orinasa, ao anatin'ny sehatra fiadian-kevitra fanohanana azy, ary sehatra hafa an'ny rehetra.
Ity angona ity no fototry ny ABM mahomby. Saingy na dia zava-dehibe aza ny habetsahan'ny angona, ny contexte sy ny kalitao dia tena zava-dehibe, na dia sarotra kokoa aza ny maka. Ny orinasam-pandraharahana dia manome lanja ny fampiasana sy ny fampidirana angon-drakitra ho anisan'ireo fanamby ABM ambony indrindra, hoy i Forrester. Ohatra, any amin'ny foibem-paritra isan-karazany amin'ny orinasa tokana, ny fanentanana eo an-toerana dia mety hanangona teboka angon-drakitra samihafa izay sarotra ny hampifanaraka. Ny vahaolana ABM feno dia afaka manaiky ny fidiran'ny tsirairay amin'ny fampiharana ny faharanitan-tsaina algorithmic mba handikana sy hampiray ny vaovao.
Hery vinavina data
Mpivarotra maro izao no miantehitra amin'ny AI mba hanombanana ny mety ho lasa mpanjifa, amin'ny fampiasana algorithm saro-pady izay manambatra ny fifandraisana taloha amin'ny mety ho vokatra mifototra amin'ny mombamomba ny fitondran-tena mitovy. Ireo modely vinavina ireo dia tena zava-dehibe ho an'ny orinasa afaka manolotra marketing manokana amin'ny ambaratonga.
Mihatsara ny vinavina sy ny tolo-kevitra algorithmika rehefa mandeha ny fotoana rehefa misy fifampiraharahana maro kokoa — saingy miankina amin'ny fitsipi-pandraharahana voavolavolan'ny fenitry ny indostria, ny fomba amam-panao na ny kalandrie isam-paritra, ary ny antony hafa ho an'ny fikambanana B2B tsirairay. Ny ekipa anatiny dia tokony ho afaka mitaona ny maodely vinavina, manatsara ny herin'ny fanodinana AI miaraka amin'ny fahalalan'olombelona, ​​mba hamoronana fampielezan-kevitra manan-danja indrindra.
Ny fahaiza-manao amin'ny fotoana tena izy, ary ny fahavononana hampiasa azy ireo
Ny toe-javatra ara-potoana dia tena zava-dehibe ho an'ny fanentanana ABM mba handefasana hafatra mety amin'ny fantsona mety amin'ny dingan'ny vinavina iray amin'ny dian'ny fiheverana ny fividianana. Satria mandray hafatra bebe kokoa mandritra ny 20 minitra farafahatarany ireo ho avy izay mirotsaka amin'ny votoaty an-tserasera, ny fampandrenesana mandeha ho azy ho an'ny ekipan'ny varotra sy ny fahafahan'ny hafatra manokana dia tena ilaina mba hiantohana ny fifandraisana haingana amin'ireo teboka fanapahan-kevitra lehibe.
Mety ho sarotra ny hahatratrarana io fahaiza-manao ara-teknika io, fa ho an'ny orinasa sasany, ny fananganana ny fahatokisana amin'ny angon-drakitra ara-barotra ilaina amin'ny fanaovana ny ankamaroan'ny automation dia fanamby goavana. Forrester dia nahita orinasa lehibe kokoa noho ny orinasa madinika milaza fa ny "tsy fahampian'ny varotra fividianana" dia sakana amin'ny fahombiazan'ny ABM. Ny ABM mandeha amin'ny angon-drakitra, mandeha ho azy dia mitaky ny varotra sy ny varotra mba hiara-hiasa, tohanan'ny faharanitan-tsaina amin'ny milina izay ahafahana mamaly ny valin'ny fotoana tena izy.
Ny refy mifampiankina dia mila teknolojia matanjaka
Na dia zava-dehibe aza ny tsirairay amin'ireo refy telo ireo, tsy misy vahaolana tokana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia efa manana angon-drakitra be dia be, saingy tsy ampy fitaovana hampiraisana sy hihetsika amin'ny fampahalalana siled. Ny famakafakana vinavina dia afaka manome fomba fijery mibanjina, saingy mila angon-drakitra manan-tantara manara-penitra mba hamokarana tolo-kevitra mifanaraka amin'izany. Ary amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ML sy ny angon-drakitra mba hampandeha ny varotra sy ny hetsika ara-barotra ihany no ahafahan'ny orinasa mamorona fifandraisana ara-potoana izay manakatona ny fifanarahana amin'ny tsena tsy mitsaha-mivoatra.
Mba hampiraisana ireo singa telo rehetra sy handrotsahana ny fahombiazan'ny ABM, ny orinasa dia tokony hikaroka sehatra ABM farany amin'ny farany izay ahafahan'ny firaisankina data, ny faharanitan-tsaina avy amin'ny AI ary ny fanodinana amin'ny fotoana tena izy. Ny fampisehoana voaporofo any amin'ireo faritra manan-danja sy ny fahaizana mampifanaraka ny tatitra sy ny fiasa ho an'ny fizarana sy ny ekipa tsirairay dia afaka manampy ireo orinasa hampifanaraka ny paikadiny ABM mba hahomby amin'ny tsena mavitrika.
Miaraka amin'ny toekarena manerantany amin'ny tetezamita, ny toeram-piasana hybrid vaovao sy ny fizotran'ny fividianana B2B dia manova ny varotra sy ny varotra orinasa. Miaraka amin'ny sehatra ABM matanjaka sy matanjaka AI, ny orinasa B2B dia afaka mampiasa angon-drakitra amin'ny lafiny telo mba hanomezana hafatra mifandraika amin'ny toe-draharaham-barotra farany, mamorona fifandraisana maharitra.
Tags: abmdata abmvarotra miorina amin'ny kaontyb2b marketingDataangona kalitaohabetsan'ny angonamrpangona vinavinaangon-drakitra tena izy
Jennifer Golden dia talen'ny varotra orinasa manana andraikitra manerantany amin'ny paikady ara-barotra sy famonoana ao MRP. Jennifer dia mitondra traikefa lalina amin'ny fampifandraisana angon-drakitra, hevi-baovao ary hetsika mba hahatonga ny fahatsapan'ny mpividy maharitra. Talohan'ny MRP, dia mpanolo-tsaina momba ny varotra sy marika izy ary nitana ny andraikitry ny mpitarika ara-barotra tao Acxiom, Rigzone sy ny hafa.
Ahoana ny fomba fikajiana ny fomba fisainana amin'ny AI manapaka ny angon-drakitra mitongilana
Ahoana ny fampidinana ny vidin'ny fividianana mpanjifa ho an'ny ROI ambony indrindra